देशको स्थिति... - Jagaran Post
जागरणपोस्ट ९ माघ २०७७, शुक्रबार २०:५६
सरसर्ती हेर्दा लाग्छ देशलाई फेरी ठुलो दुर्घटनामा होम्न लागिएको छ । हाम्रो देश बनाउने लामो सिद्दान्त बोकेर हिनेका विभिन्न पार्टीका बरिष्ठ नेताहरुले ।
विभिन्न परिस्थितिमा सत्ता साझेदारीको समयम जुटेर एक भएको संदेश प्रवाह गर्ने पार्टीका नेताहरु आजको दिनमा भने वर्तमान प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा भंग गरे लगत्तै बेग्लाबेग्लै परिस्थितिको सिर्जना हुन सक्ने एवं आफू र आफ्नो पार्टी सही रहेको र बाकी सबै गलत दिशामा अगि बढेको भासन गरेर संकेत गरेका छन् । एकअर्कामा आरोप प्रत्यारोप गरेर अरुलाई तल देखाउने र आफुलाई अब्बल बताउने बाहेक अरु केहि भाषणको लक्ष्य देखिंदैन ।
आजको दिनमा दुइतिहाईको सरकारले नै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा भंग गरेको छ । यतिमात्र नभएर सरकारमा रहेको पार्टी नै विभाजनको दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ । नेकपाको अहिलेको स्थिति हेर्दा फुट भएर फुटेको भाग जुट्न सकिराखेको छैन । त्यस्तै चुनाब चिन्ह पनि कसले लिने भन्ने कुराको टुंगो छैन । फुुटेका दुवै टुक्राहरू सडकमा गएर आफु सहि भन्ने धारणा राख्ने र अर्को टुक्रालाई तल देखाई गाली गलोज गरेर देशमा आफ्नो पकड भविस्यमा पनि कायम राख्नको लागि तल्लिन देखिएका छन् ।
यस्तै फेरी अर्को ठुलो पार्टी कांग्रेसले पनि सडकमा आएर सरकारको बिरोध जनाइरहेको छ । सरकार पूर्णरुपमा असफल भएको र विभाजित भएको नेकपाको अब नेपालमा काम नरहेको बताइरहेको छ । साथै यो गणतन्त्र नेपालमा नेपाली कंग्रेसले स्थापना गरेको र यसको लागि सदै कंग्रेसले नै सम्रक्छकको जिम्मेवारी लिने बताउँदै आईरहेको छ ।
एकथरी नेपालका युवाजमात फेरी ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्दै ठुलो संख्यामा देशभर विभिन्न ¥याली तथा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । अन्य पार्टीका नेताहरुले पनि आआफ्नो धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् ।
यस्तो परिस्थितिमा सर्बसाधरणले देशको विकासको निम्ति जीवन समर्पण गरेको बताउने यी नेताहरुले देश बनाउँदै छन् भन्ने बुझ्ने कि देशको परिस्थिति जस्तो सुकै होस् आफ्नो पार्टी र आफु नै देश चलाउने सत्तामा पुग्न जरुरी ठानेको बुझ्ने ? देश र जनताको चाहना यी पार्टी र नेता नभएको खण्डमा कहिल्य पुरा हुँदैन त ? देशको चाहना के होइछ ? जनताको चाहना के होइछ ?
के नेपाल गरिब देशको सुचिबाट हट्न लागेको छ यिनीहरुले गर्दा ? के महंगी घटेको छ प्रतेक वर्ष ? के कृषि उत्पादन बढिरहेको छ त ? स्वदेशमै स्वरोजगार वृद्धि भई विदेश जाने नेपालीको संख्यामा कमि आएको छ त ?
यी तमाम प्रश्नहरुले नेपाली जनतालाई पिरोलिरहेको बेलामा नेताहरुले जनतालाई बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गरेर देशको बागडोर आफ्नो हातमा पर्ने काममा मात्र आफूलाई होमेका छन् ।
के यिनीहरु जनमतसंग्रह गरौ राष्ट्रको चाहना अनुसार जनताको इच्छा अनुसार देशको पहिचान बनाऊ भन्न सकेका छन् ? के प्रत्यक्ष निर्वाचन गरौं र योग्य नेतालाई देशको मुख्य जिम्बेवारी सुम्पु भनेका छन् ? बिगतमा रहेको राष्ट्रको छवि जुन धमिलिंदै गएको छ त्यसकोे रक्षा गरौं भनेर भने ?
अहँ ! छैन केहि सकारात्मक कामकुरा गरौं देशलाई अगाडी बढाऊँ भन्ने कुरामा छलफल चल्दैन यिनीहरुबीच, छलफल त चल्छ केवल आफ्नो पार्टीको भविष्यको पद, प्रतिष्ठान र आफन्त कार्यकर्ताहरुको लागि ।
त्यसैले आज मलाई लेख्न मन लाग्यो कतै हाम्रो देश यी नेताहरुको सत्ताको लुछाचुडीमा रोमालिदै द्वन्द तिर त जाँदै छैन ? मेरो पार्टी मेरो नेता मेरो फलानो भन्दै हामी कतै गृह उद्दार गर्न तयार हुने मानसिकतामा त पुग्दै छैनौं ?
सोचौं बुझौं हामीले के गर्दा राष्ट्र र हामी जनासमुदायको भविष्य सुरक्षित र उज्वल हुन्छ ? सबैको कुरा सुनौं, देशको स्थिति बुझौं, मनले के चाहन्छ देशको लागि ? हाम्रो योगदान कसरी हुन सक्छ । देशको लागि हामीले आफै सहि र गलत छुट्याउनु जरुरी छ ।
“सोभियत सत्ताको पहिलो भुक्तानी”